SIDA LOO RAKIBO ADOBE FLASH PLAYER KOMBIYUUTARKA - ADOBE FLASH PLAYER - 2020
Ugu Weyn Ee Adobe Flash Player
Sida loo rakibo Adobe Flash Player kombiyuutarkaaga
Si tartiib ah oo wareeg ah oo qoyan oo qaboojiyaha ah, inkastoo ay kor u qaadeyso qaboojinta, si kastaba ha ahaatee, tani waxay la socotaa qaylo xoog leh, oo mararka qaar ka faa'iideysta ka shaqeynta kombiyuutarka. Xaaladdan, waxaad isku dayi kartaa inaad yareyso yareeynta xawaaraha qaboojiyaha, taas oo waxoogaa saameyn doonta tayada qaboojinta, laakiin waxay kaa caawineysaa yareynta heerka dhawaaqa. Qodobkan waxaan eegaynaa dhowr siyaabood oo loo yareeynayo xawaaraha wareega ee qaboojiyaha CPU.
Yaree xawaaraha wareega ee qaboojiyaha CPU
Nidaamyada casriga ah qaarkood waxay si toos ah u xakameynayaan xawaaraha wareega wareega, taas oo ku xidhan heerkulka CPU, laakiin nidaamkan lama fulin meel kasta oo aan si sax ah u shaqeynin. Sidaa darteed, haddii aad u baahan tahay inaad yareyso xawaaraha, waxa fiican inaad samayso adigoo isticmaalaya siyaabo dhowr ah.
Habka 1aad: AMD Dhameystiran
Haddii aad isticmaasho qalabka AMD ee nidaamkaaga, ka dibna qaabeynta waxaa lagu fuliyaa barnaamij gaar ah, hawlgalka taas oo diirada saaraya la shaqeynta xogta CPU. AMD OverDrive wuxuu kuu ogolaanayaa inaad bedesho xawaaraha wareega ee qaboojiyaha, hawshuna waa mid sahlan:
Dhagarka bidix waxaad u baahan tahay inaad ballaariso liiska. "Xakamaynta Waxqabadka".
Dooro shey "Falanqaynta Fanaanka".
Hadda dhammaan kuleyliyeyaasha ku xiran waxaa lagu soo bandhigaa daaqada, iyo kacdoonnada ayaa lagu hagaajiyaa iyadoo la dhaqaajinayo kuwa furayaasha ah. Xusuuso inaad codsato isbedelka ka hor intaadan ka soo bixin barnaamijka.
Habka 2: SpeedFan
Hawlaha SpeedFan waxay kuu oggolaaneysaa inaad bedesho xawaaraha wareega ee xoqan ee qaboojiyaha firfircoon ee processor ka kooban dhowr clicks. Isticmaalayaasha waxaa looga baahan yahay inay soo dejiyaan software-ka, u orodaan oo isticmaalaan xuduudaha lagama maarmaanka ah. Barnaamijku ma aha inuu meel badan ka galo kombiyuutarka waana mid aad u fudud in la maareeyo.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri: Beddelidda xawaaraha qaboobaha adoo adeegsanaya Speedfan
Habka 3: Beddel goobaha BIOS
Haddii xalka software uusan ku caawinin ama kuma habooneyn, markaa xulashada ugu dambeysa waa inaad bedesho qaar ka mid ah xuduudaha adigoo u maraya BIOS. Laga soo bilaabo isticmaalaha uma baahna wax aqoon ama xirfado dheeraad ah, kaliya raac talooyinka:
Keen kombiyuutarka oo aad BIOS tagto.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri: Sida loo galo BIOS kombiyuutarka
Ku dhowaad dhammaan qeybaha kala duwan waxay la mid yihiin midba midka kale waxayna qabaan magacyo isku mid ah. Daaqada furan, hel tabarka "Awooda" oo tag "Korjooge Hardware".
Hada halkan waxaad gacanta ku heyn kartaa xawaare gaara ah oo ah wareeggaan oo ah taageerayaasha ama isku hagaajin toos ah, taasoo ku xiran heerkulka mashiinka.
Goobtan ayaa dhammaatay. Waxay u muuqataa in la badbaadiyo isbeddelka isla markaana dib loo bilaabo nidaamka.
Maanta waxaannu si faahfaahsan u eegnay saddex siyood oo ay hoos u dhigtay xawaaraha maskaxda ee processor-ka. Tani kaliya waa lagama maarmaan haddii PC waa uu buuqsan yahay. Ha ku dhicin meelo yaryar - sababtoo ah, mararka qaarkood kuleylka ayaa dhacaya.
Eeg sidoo kale: Kordhinta xawaaraha qaboojiyaha ee processorka
Isticmaal faylasha PDF ee Excel
Xeerarka lagu saxiixayo emails
Nero Recode 15.0.00900
La kulan: Alice - kaaliyaha codka Yandex
Wi-Fi waxaan u qaybinaa laptop
Tilmaamahan waxaa ugu horeyn loogu talagalay dadka isticmaala munaasabadda, waxaana ku jiraa, sida ugu macquulsan, isku day inaad ka wada hadashid sida loo rakibo darawalada kombiyuutarka ama laptop, siyaabo kala duwan - manually, taas oo ka sii adag, laakiin ka sii fiican; ama si toos ah, taas oo sahlan, laakiin had iyo jeer ma fiicnayn, waxayna keenaysaa natiijada la rabay. Read More
Antivirus lacag la'aan ah oo bilaash ah
Xakamaynta kumbuyuutarka (Windows 7, 8, 8.1). Barnaamijyada sare
https://termotools.com so.termotools.com © Adobe Flash Player 2020